Rastra Daily | मुसालाई सुनको तक्मा !
मुसालाई सुनको तक्मा !
कम्बोडियामा बारुदी सुरुङ पत्ता लगाउने काममा खटिएर धेरैको ज्यान जोगाइरहेको मुसालाई बेलायतको च्यारिटी संस्थाले सुनको तक्माले पुरस्कृत गरेको छ ।
तान्जानियामा जन्मेको पुरस्कृत मुसाको नाम मगावा हो । ७० सेन्टिमिटर लम्बाइ भएको मगवाको तौल एक किलो दुई सय तीस ग्राम छ । केरा र बदाम खाने मगावालाई जन्मने बित्तिकै बारुदी सुरुङ सम्बन्धी तालिम दिइएको थियो ।
जमिनमुनि जब यसले विष्फोटक पदार्थ, फलामका धातुहरु भेट्छ, यसले तुरुन्तै हल्लाखोर मच्चाइहाल्छ । विष्फोटक पदार्थ भेटेपछि त्यो निकालेर निष्क्रिय नपार्दासम्म मगावा अघि बढ्दैन । तौल कम भएकोले जमिनमुनी चाप नपर्दा विष्फोट हुने कुरा पनि भएन । मानिसको गजबको साथीको रुपमा व्यवहार गर्दछ ।
भियतनाम युद्धदेखि कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा भएको गृहयुद्धमा गाउँ गाउँमा जमिन मुनि विष्फोट पदार्थहरु बिछ्याइएका छन् । कुनै पनि बेला ति पड्किने खतरा रहिरहन्छ । जंगली, झाडी र बुट्यानमा मात्र हैन खाली चौरहरुमा खेलिरहेका केटाकेटी, किसानहरु वर्षेनी यो माइनमा परेर अंगभंग हुन्छन् । कतिको त मृत्यु पनि हुन्छ । संयुक्त राष्टसंघका अनुसार अझै पनि निकै ठूलो संख्यामा यस्ता बारुदी धरापहरु कम्बोडियामा छन् ।मगावाले ४ जना मानिसले गर्ने काम एक्लैले सिध्याइदिन्छ । उसले पत्ता लगाएको बारुदी गन्ध खोतलेर हेर्दा अहिलेसम्म कतै गल्ती भएको छैन ।
संयुक्त राष्ट संघले कम्बोडियाली सरकारसँग मिलेर बारुदी धरापहरु नष्ट गरिरहेको छ । सबै बारुदी सुरुङहरु नष्ट गरिसक्न अझै १० वर्ष लाग्ने संघको अनुमान छ । मुसाको सुँघ्ने शक्ति असाध्यै बलियो भएको हुनाले बारुदी सुरुङ पत्ता लगाउन निकै प्रभावकारी भएकोले बेल्जियमको संस्था अप्पोको संयोजनमा अँगोला, जिम्बाबे र कम्बोडिया जस्ता बारुदी सुरुङबाट असाध्यै बढि प्रभावित मुलुकहरुमा यसको सफल प्रयोग भइरहेकोछ ।एजेन्सीवाट